Apple Kuona kutengesa kunowira mukota yechitatu yegore | Ndinobva mac
Apple Kutengesa kutengesa kunowira mukota yechitatu yegore
Kubva kuvhurwa zviri pamutemo kweApple Watch, iyo Cupertino-based kambani haisati yambopa ruzivo rwepamutemo nezvekutengesa kwechigadzirwa ichiSaka isu hatinyatso kuziva kana iri kutengesa mushe kana kuti kwete, chinhu chete chatinogona kuita kuvimba nenhamba idzo vaongorori vatipa. Sekureva kweshumo razvino kubva kukambani yeIDC, mukota yekupedzisira iyi kuona kutengeswa kweApple Watch kwakadzikira zvakanyanya, kuchisvika chete mamirioni emidziyo, data rinopesana nemamirioni mana akatengeswa neApple mudziyo uyu mukota yapfuura.
Apple yaita kuti Apple Tarisa chishandiso chinotengeswa zvakanyanya mumusika unosakara, stichifunga nezvezvishongo zvekuverengera, uko Fitibit ari mambo chaiye musika kure kure kubva kune wechipiri, Xiaomi. Chikonzero chikuru chekudonha uku mukutengesa kunogona kukonzerwa nerunyerekupe nezve kutangwa kwechizvarwa chechipiri cheApple Watch, chizvarwa chechipiri chakapihwa munaGunyana 7 uye icho chakatiunzira mana emhando itsva: Apple Watch Series 1, Apple Watch Series 2, Apple Watch Nike + uye iyo Apple Watch Edition, modhi yakachinja goridhe kune zvedongo uye yakadzikisa mutengo wayo neinenge $ 9.000.
Mugore rimwe mugove wemusika weApple Yakaenda kubva pa70.2% yayaive nayo mukota yechitatu ya2015, ichienda kungoita ikozvino 41.3%. Muchidzidzo chimwe chete tinogona kuona kuti Garmin akazopedzisira aisa musoro wake mumusika uyu uye nepasuo hombe, iro rakabva pakuva nemugove we2.3% gore rapfuura panguva ino kusvika pa20.5%. Asi kwete chete Garmin akakura, asi Samsung yakaona chikamu chayo chemusika ichiwedzera kubva pa6,4% kusvika 14.4%, ichigara munzvimbo yechitatu pachinzvimbo. Pachinzvimbo chechina tinowana Motorola (Lenovo) uye Pebble, izvo zvabva pane chikamu che6.2 uye 3.3% kusvika 0.1% chete.
Kudonha mukutengesa kwemidziyo yakagadzirirwa Android Wear iri inokonzerwa nekunonoka kweGoogle kutanga Android Wear 2, iyo yaifanirwa kurova musika pakupera kwaNyamavhuvhu asi pakupedzisira, sekukuzivisai kwatakaita mavhiki mashoma apfuura, kumisikidzwa kwakanonoka kusvika kutanga kwegore rinouya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple Kutengesa kutengesa kunowira mukota yechitatu yegore
Miguel Angel Gutierrez akadaro
Makumbo echokwadi, iwo anodhura kwazvo
Pindura Miguel Angel Gutierrez
Sid Meier Kubudirira VI, iko zvino kwave kuwanikwa paStam chikuva cheMac
Maitiro ekufambisa yako Evernote manotsi kuApple Notes pasina rubatsiro rwekunze